दर खाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस । – मोफसल खबर
Home जिबनशैली दर खाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस ।
दर खाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस ।
Posted on २०७७, ४ भाद्र बिहीबार १७:३०
आज दर खाने दिन । हिन्दु महिलाहरूले भोलि बस्ने निर्जला व्रतको लागि आज मध्यरातमा पौष्टिक युक्त खाना खाएर दिनभरिको व्रतको पूर्वतयारी गर्छन् । भाद्र कृष्ण तृतीयाको दिन मनाइने तीजको दिन महिलाहरू पानी पनि नपिई व्रत बस्ने गर्छन् । त्यसैको ठीक एक दिनअघि शरीर अस्वस्थ हुने गरी धेरै चिल्लो र पिरो खाने चलन छ । तर त्यसरी असन्तुलित र कम पौष्टिक खाना खान नहुने पोषणविद्हरूको मत छ ।
हरियो तरकारी, फलफूल र गेडागुडीले शरीरमा भिटामिनको मात्रा समेत बढाउने गर्छ । भिटामिन र खनिज तत्वहरू मात्रात्मक रूपमा शरीरको लागि कम आवश्यक हुन्छ । यद्यपि शरीरको लागि यी पदार्थहरू अत्यावश्यक पनि छन् ।बिहीबार दर खाने दिन । दर खाँदा पनि खाद्यान्नको मात्रा र परिकारको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दर खाँदा बढी चिल्लो, पिरो र मसलायुक्त खाना खानु हुँदैन । पोषणविद्हरूका अनुसार अघिल्लो दिन बढी चिल्लो पिरो खाना खाने र भोलिपल्ट दिनभरि निर्जला व्रत बस्दा त्यसले शरीरमा विभिन्न समस्या सिर्जना हुने भएकोले अघिल्लो दिन सन्तुलित खाना खानुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।अर्काेतर्फ हिन्दु संस्कार अनुसार तीजमा पानी पनि नपिई व्रत बस्ने चलन छ । समयसमयमा व्रत बस्नु स्वास्थ्यको लागि समेत उपयुक्त मानिन्छ । तर पानी पनि नपिई बस्ने व्रतभन्दा पानी र फलफूल खाएर बस्ने व्रतले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने पोषणविद्हरू बताउँछन् ।
अघिल्लो दिन कार्बाेहाइड्रेड, प्रोटिन र भिटामिन युक्त खाना खाने र तीजको दिन दही, फलफूल, हरियो सलाद आदिको खाने हो भने स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नआउने जानकारहरू बताउँछन् ।त्यस्तै, दर खाने दिन बजारमा पाइने विभिन्न रंगका मिठाइ पनि खाने चलन छ । तर यस्तो केमिकलयुक्त खानेकुराले अपचको समस्या सिर्जना हुने उनीहरूको मत छ ।